Sida loo soo celiyo ama dib loogu dhigo AirPods Pro | Wararka IPhone
Sida loo soo celiyo ama dib loogu dhigo AirPods Pro
Mid ka mid ah xulashooyinka aan ka heli karno dhammaan badeecadaha haddii ay jiraan dhibaatooyin nooc uun ah ama aan dooneyno inaan iyaga siino ama aan iibino, waa ikhtiyaarka ah in dib looga soo celiyo aaladda. Xaaladdan oo kale waxaan eegaynaa sida aan u awoodno soo celi AirPods Pro cusub, tani waa ikhtiyaar in dhammaanteen ay tahay inaan ogaano waana xiiso leh in la ogaado tallaabooyinka.
Si loo soo celiyo ama dib loogu dhigo AirPods Pro, tillaabooyin aad u tiro badan looma baahna sida sidoo kale ma na wajahayno wax murugsan si ay u fuliyaan, qof kastaa wuu sameyn karaa. Marka bal aan aragno sida dib u soo celinta loogu sameeyay samaacadaha dhagaha ee waxqabadka dhabta ah ka dhigaya dadka isticmaala Apple.
Runtu waxay tahay inaan ubaahnaan doonin ficilkan marar badan laakiin markaan u baahanahay waa inaan ogaanno sida loo sameeyo. Markaa aan wax walba hoos u dhigno oo aan diiradda saarno doorashadan. Waxa ugu horreeya ee ay tahay inaan sameyno waa inaan ka xirno AirPods-ka, tallaabada dib u soo celinta:
Waxaan ka fureynaa Settings-ka iPhone-ka waxaanan tagnaa Bluetooth
Waxaan raadineynaa AirPod-keena oo waxaan gujineynaa macluumaadka "i" sare
Hadda dhagsii qalabka Skip oo xaqiiji
Waxaan horey u haysanay AirPods aan xirnayn hadana waxaan kusii wadi karnaa dib udajinta dhameystiran iyaga. Tallaabadan hore waxay macnaheedu noqon kartaa in fashilka (haddii dhibaato dhacdo) la xalliyey, laakiin marwalba waxaan haysannaa tallaabada xigta, taas oo ah dib u dejinta AirPods Pro. Si tan loo sameeyo, waxaan raacnaa tallaabooyinkan:
Xidh daboolka oo sug 30 sekan, ka dibna dib u fur daboolka AirPods
Hadda daboolka furan, riix batoonka qaabeynta ee gadaasha dacwada illaa 15 ilbidhiqsi, illaa ilayska xaaladdu ifayso
Waxaan xirnaa daboolka sanduuqa. Waxaan dhameystirnay howsha AirPods Pro dib loo soo celiyay
Hadda hadaan rabno inaan markale ururino waxaan si fudud uga tageynaa daboolka oo aan dib u dhignaa AirPods-ka iPhone-ga agtiisa. Waxaa nala weydiin doonaa inaan dib u qaabeyno markale, waxaan si fudud u raacnaa talaabooyinka waana taas.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Casharrada iyo buugaagta » Sida loo soo celiyo ama dib loogu dhigo AirPods Pro
Apple waxay ku dhawaaqday dhacdo lama filaan ah December 2